Mariela Carril | | လမ်းပြ, ကျွန်းများ
ကမ္ဘာပေါ်တွင်လှပသောကျွန်းများရှိသည်တကား! အထူးသဖြင့်၌တည်၏ တောင်ပစိဖိတ်ကျွန်မကလေးဘဝတုန်းကဖတ်ခဲ့တဲ့ဂျက်လန်ဒန်ဇာတ်လမ်းတွေရဲ့နိုင်ငံ။ ဒီမှာကမ္ဘာရဲ့ဒီအစိတ်အပိုင်းမှာဥပမာအားဖြင့် ကွတ်ကျွန်းစုများ.
၎င်းသည်ကျွန်းငယ်လေးဖြစ်သည် နယူးဇီလန်အနီး အစိမ်းရောင်နှင့်စိမ်းပြာရောင်ရှုခင်းများ၊ ပူနွေးသောရေများနှင့်ပိုလီနီးရှားယဉ်ကျေးမှုတို့ဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုငါတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သလား။
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ ကျွန်း ၁၅ ကျွန်းရှိသည် စုစုပေါင်းareaရိယာ 240 စတုရန်းကီလိုမီတာဖုံးအုပ်။ ကွတ်ကျွန်းများ နယူးဇီလန်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ဤနိုင်ငံသည်ကာကွယ်ရေးနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေးရာများကိုကိုင်တွယ်သည်။ သို့သော်အချိန်အတန်ကြာလျှင်၎င်းတို့သည်ပိုမိုလွတ်လပ်မှုရှိကြသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်နှင့်လူ ဦး ရေအများဆုံးသောလူ ဦး ရေသည် Rarotonga ကျွန်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး၎င်းနှင့်ဝေးကွာသောကျွန်းများဖြစ်သည် သစ်သီးများတင်ပို့ခြင်း၊ ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ပုလဲမွေးမြူခြင်းနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း.
သူတို့ကို ၁၇၅၃ တွင်ပထမဆုံးရောက်ရှိလာခဲ့သောနာမည်ကျော်ဂျိမ်းစ်ကွတ်ခ်နောက်တွင်ရာစုနှစ်များစွာကသူ့ကိုနာမည်ပေးခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးနေထိုင်သူများဖြစ်ကြသည် တဟီတီမှပေါ်လီနီးရှား သို့သော်ဥရောပသားများကမူအခြေချနေထိုင်သူများကြောင့်အသတ်ခံရသောကြောင့်အနည်းငယ်အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉ ရာစု ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ်များအထိခရစ်ယာန်အချို့သည်ကံကောင်းခဲ့သော်လည်းထိုရာစုနှစ်အတွင်းကျွန်းများဖြစ်လာခဲ့သည် ဝေလငါးများအတွက်အလွန်ရေပန်းစားသောမှတ်တိုင် သူတို့ရေ, အစားအစာနှင့်သစ်သားနှင့်အတူထောက်ပံ့ခဲ့ကြသည်ကတည်းက။
၁၈၈၈ ခုနှစ်တွင်ဗြိတိသျှသည်သူတို့ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည် ကာကွယ်ပေး, ဒါကြောင့်တဟီတီအတွက်ပြီးသားခဲ့ကတည်းကပြင်သစ်သူတို့ကိုသိမ်းပိုက်လိမ့်မည်ဟုကြောက်ရွံ့ခြင်းမပြုမီ။ ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်ဗြိတိသျှအင်ပါယာကနယူးဇီလန်ကိုလိုနီနယ်မြေများအဖြစ်သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင်ကွတ်ကျွန်းစုရှိဗြိတိသျှနိုင်ငံသားများသည်နယူးဇီလန်နိုင်ငံသားများဖြစ်လာသည်။
ကွတ်ခ်ကျွန်းများသည်တောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင်ရှိသည်။ အမေရိကန်ဆာမိုအာနှင့်ပြင်သစ်ပေါ်လီနီးရှားအကြား။ တကယ့်ကိုလှပတဲ့ဆိုက်ပါတကား! သူတို့ကမတူညီတဲ့အုပ်စုတွေခွဲခြားထားတယ်, တောင်ဘက်၊ မြောက်ဘက်နှင့်သန္တာကျောက်ဆောင်တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကိုမီးတောင်လှုပ်ရှားမှုဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းနှင့်မြောက်ပိုင်းကျွန်းများသည်အသက်အကြီးဆုံးအုပ်စုဖြစ်သည်။ ရာသီဥတုမှာအပူပိုင်းဒေသဖြစ်သည် မတ်လမှဒီဇင်ဘာလအထိသူတို့သည်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းသို့ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။
အမှန်တရားကတော့သူတို့ဟာအရာရာနဲ့အလှမ်းဝေးတဲ့ကျွန်းများဖြစ်ပြီးအပြင်ကိုအမှီပြုနေရတဲ့အတွက်စီးပွားရေးကိုခြိမ်းခြောက်နေတယ်။ ထို့အပြင်ရာသီဥတုသည်များသောအားဖြင့်ရာသီဥတုဒဏ်ကိုခံနိုင်သဖြင့်ရာသီဥတုကိုလည်းမကူညီနိုင်ပါ။ '90s ကတည်းကသူတို့ဖြစ်လာကြသောကြောင့်အမှုအရာအနည်းငယ်တိုးတက်လာသည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်။
သင်သည်ကျွန်းများအားဖြင့်ကျွန်းသို့ရောက်ရှိသည် Air New Zeland, Virgin Australia သို့မဟုတ် Jetstar ။ နယူးဇီလန်မှတစ်ဆင့်အော့ကလန်နှင့်သြစတြေးလျမှလေယာဉ်များစွာရှိသည်။ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မှသို့မဟုတ်နယူးဇီလန်လေကြောင်းလိုင်း၏အခြားမြို့များမှလည်းသင်ရောက်ရှိနိုင်သည် ထို့နောက်တစ်ကျွန်းမှတစ်ကျွန်းသို့လှေသို့မဟုတ်လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးသွားနိုင်ပါသည် Air Rarotonga.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်နှင့်အတူကျွန်းကွတ်မှဝင်ပေါက်ဖြစ်ပါသည်: ရာရိုတိုဂါကျွန်း။ ပတ် ၀ န်းကျင် ၃၂ ကီလိုမီတာသာရှိပြီးကားဖြင့်မိနစ် ၄၀ အတွင်းအလျင်အမြန်သွားနိုင်သည်။ သို့တိုင်လှပပြီးကွဲပြားခြားနားသောရှုခင်းများရှိပြီးစားသောက်ဆိုင်များ၊ တည်းခိုစရာများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများစွာကိုစုစည်းထားသည်။
နောက်ထပ်လှပသောကျွန်းတစ်ခုဖြစ်သည် Aitutaki, el မြေကြီးပေါ်မှာကောင်းကင်။ Rarotonga မှမိနစ် ၅၀ အကွာတွင်ရှိပြီးတြိဂံပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည် ဒါကသန္တာကျောက်တန်းပဲ သေးငယ်သည့်ကျွန်းငယ်လေးများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသည့်အတွင်းပိုင်းစိမ်းလန်းသောရေကန်နှင့်အတူ။ ၎င်းသည်ကွတ်စ်၏ဒုတိယအလည်ပတ်ဆုံးအများဆုံးကျွန်းဖြစ်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်သည် ပျားရည်ဆမ်းခရီး ဦး တည်ရာ.
သငျသညျလှေစီးစီး, ကောင်းသောအဖြူရောင်သဲသဲသောင်ပြင်ပေါ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး, စွန်လှေ, ငါးဖမ်းသွား, snorkel နှင့်ရေကူးရေငုပ်, စကူတာသို့မဟုတ်စက်ဘီးစီးသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ဒီမှာနေနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာလက်မှာအရာအားလုံးရှိနိုင်ပါသည်။
Atiu ၎င်းသည်နှစ်သန်းရှစ်သန်းကျော်ရှိသောကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်သည်။ Isaတောတွင်းနှင့်အပူပိုင်းဒေသကျွန်း Rarotonga ၏ထက်ဝက်အရွယ်အစား။ ဒီနေရာမှာသဘာဝ, ယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်း၏ဗဟိုတည်ရှိရာရွာငါးခုရှိကဖေးစုံတွဲတစ်တွဲ။ အော်ဂဲနစ်ကော်ဖီစိုက်ပျိုးပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သော Vibe တစ်ခုလည်းရှိသည်။
မင်းဘယ်လိုရောက်လဲ Rarotonga သို့မဟုတ် Aitutaki မှ ၄၅ မိနစ်ကြာပျံသန်းချိန်တွင် ပထမကျွန်းမှတစ်ပတ်လျှင်သုံးကြိမ်၊ စနေနေ့၊ တနင်္လာနေ့နှင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့များဖြစ်သည်။ ဒုတိယအနေဖြင့်လေယာဉ်သုံးစင်းဖြစ်သော်လည်းသောကြာနေ့၊ တနင်္လာနေ့နှင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့များတွင် Air Rarotonga မှတဆင့်ပျံသန်းသည်။
မန်ဂါးယား ၎င်းသည်နှစ်ပေါင်း ၁၈ သန်းရှိရမည်ဖြစ်သောကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်သည် ၎င်းသည်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းတွင်ရှေးအကျဆုံးကျွန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကွတ်ကျွန်းကျွန်းသည်ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးရာရိုတွန်ဂါမှမိနစ် ၄၀ သာပျံသန်းသည်။ ၎င်းသည်လှပသောသဘာဝအလှအပ၏၊ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းသန္တာကျောက်ဆောင်နှင့်အတူစိမ်းလန်းသောအပင်များ၊ ကြည်လင်သောရေကြည်လင်သည့်ကမ်းခြေများ၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဂူများ၊ သာယာလှပသောနေဝင်ချိန်များ၊ ၁၉၀၄ သင်္ဘောပျက်။ အပျက်အစီးများနှင့်ဒေသတွင်းစျေးကွက်များ။
La Mauke ကျွန်း"ငါ့နှလုံးအနားမှာအဘယ်မှာရှိ" ဖြစ်ပါတယ် ပန်းများနှင့်ဥယျာဉ်ခြံများပေါများသည့်ဥယျာဉ်ကျွန်း။ ဤတွင်သင်သည်အရှေ့ကမ်းရိုးတန်းရှိအဏ္ဏဝါဂူသို့သွားရမည်။ သူ၏ခေါင်မိုးများမှတဆင့်နေရောင်ကိုစစ်ထုတ်။ အပြာရောင်မီးပွားများကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်ဒီရေကျချိန်တွင်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင်နစ်မြုပ်ခဲ့သော Te Kou Maru သင်္ဘောပျက်၏အကြွင်းအကျန်များလည်းရှိသည်။
La မီတီရိုကျွန်း လှပပြီးထူးခြားတဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်တယ် သဘာဝရေကန်များနှင့်ဂူနှင့်အတူ မြေအောက်s ။ တစ်ချိန်ကဤကျွန်းငယ်လေးသည်မီးတောင်ဖြစ်ခဲ့သော်လည်းပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတစ် ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည် သန္တာ atoll။ ဒီဘူမိဗေဒဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှုကလှပပြီးအကောင်းဆုံးရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးစခန်းကိုပေးခဲ့တယ်။ ၎င်းတွင်လူ ၂၀၀ ခန့်နေထိုင်ကြသည်။ အလွန်နွေးထွေးသည်။ သင်သည်လေယာဉ်ဖြင့်ရောက်လာပြီးယေဘုယျအားဖြင့်တည်းခိုခန်းနှင့်လေ့လာရေးခရီးကိုငှားနိုင်သည်။
ဤကျွန်းများသည်ကွတ်ကျွန်းစုများထဲတွင်လူသိအများဆုံးကျွန်းများဖြစ်သော်လည်းအမှန်တကယ်ပင်ထိုကျွန်းများရှိသည် အခြားကျွန်းများ - ရက္ကဟားဂါ၊ မနိဟီကီ၊ ပူကာပူကာ၊.. ခေါ်ဆိုမှုများမှာ ပြင်ပကျွန်းများ, ဆွဲဆောင်မှု, Wilder နှင့် ဝေးလံခေါင်သီခြင်းနှင့် unspoiled ။ စုစုပေါင်းကျွန်းရှစ်ကျွန်းရှိသည်။ တောင်ပိုင်းတွင် ၇ ခုနှင့်မြောက်ဘက်တွင်ကျွန်းခုနစ်ကျွန်းရှိသည်။ အချို့သောဒေသများသို့ရောက်ရှိသောဒေသတွင်းလေကြောင်းများနှင့်အခြားသင်္ဘောများရောက်ရှိလာသည်။
သူတို့သည်ကျွန်းများနည်းပါးသောကြောင့်စိတ်ပျက်အားငယ်နေသောလူစုမှဝေးရာတောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာသို့သင်အဝေးရောက်နေလိုလျှင်။ နောက်ဆုံး၊ ကွတ်ကျွန်းများအတွက်နေရာထိုင်ခင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်မူကွဲပြားခြားနားပြီးအများစုမှာရေစွန်းတွင်တည်ရှိသည်။ ရှိပါတယ် အပန်းဖြေစခန်းများ၊ ဇိမ်ခံအိမ်ယာများ၊ ဟိုတယ်များ၊ အငှားအိမ်များ။ မိသားစုတစ်ခု၊ မီးဖိုချောင်နှင့်အရာခပ်သိမ်းနှင့်အတူအိမ်များသို့မဟုတ်ဇိမ်ခံအပန်းဖြေစခန်းများသို့စုံတွဲတစ်တွဲအနေဖြင့်သွားနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » ကျွန်းများ » ကွတ်ကျွန်းများသို့သွားပါ